Nihotsaka ny ampahan-drindrin’ny CEMDLAC: mpiasa enina naratra tototry ny tany, nisy no voa mafy | NewsMada
Par Taratra sur 30/10/2020
Nihotsaka, omaly, ny ampahan-drindrina amin’ny trano CEMDLac, na ny Galerie 6 teo aloha, an’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy serasera, etsy amin’ny Araben’ny Fahaleovantena Analakely. Mpiasa enina ny naratra tototry ny tany.
Olona enina indray naratra ka tena voa mafy ny roa! Io ny vokatry ny fihotsahana tao amin’ny tranoben’ny minisitera ao amin’ny Arcade Analakely, CEMDLac teo aloha, omaly antoandro tamin’ny 11 ora sy 30 mn antoandro. Galerie 6 kosa ny nahafantaran’ny maro ity trano ity hatramin’izay. Tampoka ny fitrangan’ny loza teny an-toerana sady tsy nampoizin’ny rehetra, araka ny fanazavan’ireo nahita ny zava-nitranga teny an-toerana. Zavatra nidoboka mafy kosa ny henon’ireo olona teny amin’ny manodidina. Raha ny fampitam-baovao nampitain’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, nisy ampahan-trano fiasan’ny minisitera efa simba be nandritra ny taona maro no nirodana tamin’ny ampahany omaly ka niteraka faharatrana teo amin’ireo mpiasa niasa ao an-toerana. Efa natahorana ny firodanany ka noho izay indrindra ny antony nahatonga ny minisitera nanala ny mpiasa rehetra tao, roa volana lasa izay, ary nanarama orinasa hisahana maika ny fanaraha-maso ity trano ity satria ho avy ny fotoan’ny orana.
Tsy nisy kosa ny aina nafoy na teo aza ireo naratra…
Nasiana talantalan-kazo “échafaudage” hahafahana mandrodana azy tsikelikely ity trano ity. Tao anatin’izay asa fandrodanana izay indrindra no nisy nihotsaka ny tany amin’ny farany ambony ka nifatratra tamin’ireo mpiasa nanao ny asa fandrodranana. Vokany, mpiasa miisa enina indray naratra tototry ny tany, saingy tena voa mafy ny roa ka nentina haingana namonjy hopitaly, araka ny tatitra nampitain’ny lehiben’ny sampana mpamonjy voina, ny Kly Razafimanahaka Tiana. Ny mpamonjy voin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra no nitondra ireo naratra namonjy hopitaly. Na teo aza anefa izany, tsy nisy kosa ny aina nafoy. Ankoatra ireo mpamonjy voina, tonga teny an-toerana nanamafy ny fitandroana ny filaminana ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’Analakely (CSP1) niaraka amin’ny polisy monisipaly. Marobe rahateo ireo fitangoronana teny an-toerana nandritra izany.